August 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Aug 31, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 13-01-1442,…
Sawirro: Ka Qeyb Qaado Dhammeystirka Dhismaha Masjidka Al-Hudaa.
cusmaan	 Aug 31, 2020 0
Masjidka Al-hudaa oo uu dhismihiisu ka socdo degmada Saakow islamarkaana socda muddo dhowr bilood ah ayaa wuxuu u baahan yahay in la dhammeystiro. Masjidka ayaa ka kooban sadax dabaq waxaana ay hawshu mareysaa marxaladdii ugu dambeysay.…
Kenyaatiga iyo Askarta maamulka Jubbaland Oo lagu weeraray Jubbooyinka.
Ciidamada milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro saf ballaaran ah waxay ku qaadeen deegaanno iyo degmooyin katirsan gobolka Jubbada hoose oo ay ku suganyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Saldhiga…
Axmad	 Aug 30, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 12-01-1442,…
Dowladaha Turkiga iyo Greega ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xoogan oo soo cusboonaaday todobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana labada dal ay isku hayaan arimo la xiriira badda medeterianka dhinaceeda bari. Dhawaan ayay dowladda…
Dagaallo Kenyaatiga lagu qaaday Oo ka dhacay Jubbooyinka.
Ciidamada mallatariga Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weerarro ku qaaday askarya Kenya ee heysata qeybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose. Wararka naga soo gaaraya gobolka ayaa sheegaya in weerar hor leh lagu qaaday…